Death Knight - Torolàlana WoW | WoW Guides (Pejy 2)
Fahafatesana Knight Frost - Torolàlana PVE - Patch 7.3.5
Torolàlana ho an'ny Fahafatesan'ny Knight Knight an'ny Adriielito - C'Thun, hasehoko anao ny talenta sy ny fitaovana tsara indrindra hahazoana ny fahaizan'izy ireo feno.
Tsy masina Fahafatesana Knight PvP Talents - Beta Legion
Izahay dia mijery ny talenta pvp knight pvp tsy masina amin'ny rafitra fanomezam-boninahitra vaovao ao amin'ny Legion beta build 21691.
Frost Death Knight PvP Talents - Legiona Beta
Nijery ny talenta Frost Death Knight PvP avy amin'ny rafitra fanomezam-boninahitra vaovao ao amin'ny Legion beta build 21691 izahay.
Blood Death Knight PvP Talents - Legiona Beta
Nijery ny talenta Blood Death Knight PvP avy amin'ny rafitra fanomezam-boninahitra vaovao ao amin'ny Legion beta build 21691.
Yuki maneho hevitra momba ny Death Knight Blood - Legion
Tongasoa eto amin'ity torolàlana horonantsary vaovao an'i Yuki maneho hevitra momba ny Death Knight Blood ity, izay ahitantsika ny fahaiza-manao, talenta ary artifact an'ity kilasy ity.
Yuki maneho hevitra amin'ny Unholy Death Knight - Yuki Series - Legion
Tari-dahatsary vaovao an'i Yuki maneho hevitra momba ny Unholy Death Knight, ao no ahitantsika talenta, fahaizana ary artifact an'ity kilasy ity.
Zashy maneho hevitra momba ny Death Knight Frost - Yuki Series- Legion
Zashy maneho hevitra momba ny Death Knight Frost, fizarana vaovao amin'ilay andiany videoguide novokarin'i Yuki series.
Frost Emissary sy Frost Reaver - Fantaro ny toetrany - Legiona Alpha
Nodinihinay ny toetrany sy ny toetran'ny Frost Emissary sy Frost Reaver, ilay fitaovam-piadiana namboarin'ilay kamboty maty Frost tao amin'ny Legion Alpha.
Maw an'ny voaozona - Fantaro ny toetrany - Legiona Alpha
Nodinihinay ny toetrany sy ny toetran'ny Maw of the Damned, fitaovam-piadiana vitan'ny Knight maty tao amin'ny alfa Legion.
Apokalipsy - Fantaro ny toetrany - Alpha Legion
Nodinihinay ny toetrany sy ny toetran'ny Apôkalipsy, ilay fitaovam-piadiana namboarin'ilay Knight tsy maty masina tao amin'ny Legion Alpha.
Knight Knight tsy masina amin'ny legiona - fahaiza-manao sy talenta - Legiona Alpha
Izahay dia mamerina mijery ny fanovana ny Talenta sy ny fahaiza-manao izay hijaly ao amin'ny Legiona.
Knight Legion maty Knight - Fahaiza-manao sy talenta - Legiona Alpha
Izahay dia mamerina mijery ny fiovana eo amin'ny Talenta sy ny fahaiza-manao izay hijaly ao amin'ny Legion.
Fahafatesan'ny Knight Knight ao amin'ny Legiona - Fahaiza-manao sy talenta - Legiona Alpha
Izahay dia mamerina mijery ny fanovana ny Talenta sy ny fahaiza-manao izay hijaly ny Death Knight Frost ao amin'ny Legion.
Tsy masina ny Knight Knight Artifact - Apokalipsy - Legiona Alpha
Nahazo ny Unholy Death Knight Artifact, Apocalypse izahay. Raha dinihina, ity horonan-tsary ity dia misy mpanimba ny tantara.
Artifact Knight Frost Death Knight - Ny lelan'ny printsy nianjera - Legiona Alpha
Nahazo ny Frost Death Knight Artifact, ny Lavo Prince's Blades, antsoina hoe Frost Emissary sy Frost Reaver izahay. Raha tandremana, ity horonan-tsary ity dia misy mpanimba ny tantara.
Aretim-pandrenesana ra an'ny maty Knight - Maw an'ny voaozona - Legiona Alpha
Nahazo ny Artifact Knight Death Blood, Maw of the Damned isika. Ity horonan-tsary ity dia misy mpanimba ny tantara.
Niova ny Knight Knight Legion - Mandroso
Mila mahafantatra bebe kokoa ny Death Knight isika ao amin'ny Legion, mitondra ny fanovana ny fahaiza-manao sy talenta an'ny tsirairay manokana izy ireo.
Fitaovam-piadiana Artifact: Knight Knight
Asehonay aminao ny fanitarana fampahalalana momba ny fitaovam-piadiana artista ho an'ny maty ao amin'ny World Of Warcraft: Legion.
Aorian'ny 4.0.1 ... Hanao ahoana ny Death Knight-ko?
Aleo manohy mahita ireo kilasy milalao, amin'ity indray mitoraka ity aho dia hanandrana iray izay hahazo fanovana maro. Kilasy, ambonin'ny fahalalam-pomba rehetra, tena tompokolahy. Eny, anio izany dia ny Knight Knight (vazivazy ratsy, ny fitarainana ao amin'ny fanehoan-kevitra xD).
Saingy, ny Knight Knight dia hiova be, satria ny rantsana izay tsy ra dia tsy ho azo ampiasaina amin'ny tanky, tsy toy ny amin'izao fotoana izao fa amin'ny sampana rehetra dia afaka mifindra amin'ny habe lehibe na ambany kokoa ianao. Ny sampana Frost sy Unholy dia hitohy amin'ny toetrany dps ankehitriny. Frost miaraka amin'ny fitaovam-piadiana roa tanana ary Unholy miaraka amin'ny fitaovam-piadiana roa lehibe.
Alohan'ny hijerena ireo fanovana izay misy dia mora ny mahatadidy fiovana kely izay hiaraka amin'ny rune sy ny hery runic. Aorian'ny patch 4.0.1, ny rune tsy hihoatra ny famerenam-bidy izy ireo miaraka, fa ny iray amin'izy roa aloha dia havaozina ary avy eo ny iray hafa raha efa nampiasainay izy ireo. Mety ho toa fahasimbana tao an-dakilasy io, saingy gaga aho nahita fa ny fanehoan-kevitra avy amin'ny olona izay matetika mampiasa an'ity kilasy ity dia manohana an'ity fanovana ity. Te-hanome anao ny hevitro aho, saingy tsy dia ampiasako matetika ity kilasy ity, fa mbola ambaratonga 72 izany, ka tsy afaka manana ny tena hevitro aho. Andao hojerentsika izao ny fiovana.
Frost DPS Death Knight Guide
Ny Death Knight ao amin'ny sampany Frost dia tsy mbola DPS nahay. Amin'ny maha tanky azy dia nanana safidy izy (na dia vitsy aza) fa amin'ny maha DPS azy dia tsy nahavita nanatratra DPS hafa izy. Nanova an'ity toe-javatra ity i Blizzard rehefa nanolotra talenta vaovao, Fandrahonana Thassarian, avy eo nanomboka nanomboka niainga ny fampiasana ny Frost DPS CoM, nefa tsy dia mbola kely.
Ny fahatongavan'ny patch 3.3.3 sy ny fanatsarana ao amin'ny Claws mangatsiaka, y Voina vy mangatsiaka Napetrak'izy ireo amin'ny toerana saika mibahan-toerana amin'ny fampiasana CoM DPS ny sampana fanala.
Ho an'ny DK DPS Frost dia hampiasa ity sampana ity izahay, 0 / 53 / 18, nisy ny fifanakalozan-kevitra betsaka momba ny hametrahana teboka marobe ao Ranomandry mainty y Fangatsiahan'ny fasana manimba ny Blade mandro amin'ny rà, fa ny matematika kosa dia mampiseho fa amin'ny fidiran'ny fiadiana ankehitriny sy ny fandehanana an-tanana 1 Blade mandro amin'ny rà dia ambony noho ny fananana ny teboka feno ao Ranomandry mainty y Fangatsiahan'ny fasana.
Namaly i Guiaswow: Inona avy ireo toetra tian'ny DPS CoM?
Fotoana vitsy lasa izay, nanokana ampahany tamin'ny tranonkala izahay hamaliana ireo fisalasalana misy amin'ireo mpampiasa izay miseho.
Ny hevitrao dia ianao, mandefasa anay ny fanontanianao amin'ny alàlan'ny hevitrao na ny mailakao webmaster@guiaswow.com ary hiezaka hamaly fanontaniana iray isan-kerinandro izahay. Ny fanontaniana dia mety momba izay mampatahotra anao momba ny World of Warcraft, ilay addon mitady tsara indrindra, izay misy ny Time Lost Proto-Drake, na inona na inona.
Elaela hatramin'ny ela ny fanontaniana farany, fa androany dia naharay mailaka nametraka taminay ity fanontaniana manaraka ity izahay:
Dani no anarako ary efa elaela aho no namaky anao (tsy tena xD), manana Death Knight aho ary te-hanangana lohahevitra iray: Force, penetration Armour sa izy roa? rehefa manao dps na inona na inona fananganana ampiasainao.
Ny tiako holazaina dia: iza amin'ireo staty roa no manatsara ny fahavoazana ataoko amin'ny sefo isaky ny teboka? tsara kokoa ny mamely voa mafy na mamely kely ary tsy miraharaha ny fanalefahana sefo sasany
Tsy mbola nanandrana ireo roa ireo aho ary niaraka tamin'ny roa ary tsy hitako izay safidiko, hiteny aho fa tsara kokoa ny mampitombo ny tanjaka fa tsy afaka manome toky anao aho, azonao omena tanana ve aho?
Misaotra betsaka sy miarahaba anao.
Manantena izahay fa hahazo famporisihana ianao handefa fanontaniana vaovao izay azo antoka fa hanampy mihoatra ny iray.
Ny manam-pahaizana momba ny Death Knights, Gaza, mamaly ny fanontanian'i Dani.
Hevitra: momba ny fanovana ny DK ho an'i Gaza
Azo inoana fa manaraka ny fiovan'ny kilasy ianao Knight Knight ho an'ny Cataclysm ary ankehitriny, manana isika ny hevitr'ireo izay milalao ny kilasy momba ny fiatraikan'izany fiovana izany. Noho izany, mangataka aminao izahay hampiasa ny rafi-pifidianana lahatsoratra hanombanana ny lahatsoratra an'ny Gaza miangatra
Raha mbola tsy hitanao izay miandry ny Knight Knightaza hadino ny manamarina ny fanovana ho avy. Hanohy hamoaka ny hevitrao izahay ary, raha sahy ianao, dia azonao atao ny mijery mijery ny fomba mandray anjara amin'izany ny hevitry ny kilasy.
Ity misy op-ed nataon'i Gaza, Death Knight Perception Tank avy amin'ny mpizara Dun-Modr. Ho fanampin'ny maha-mpanoratra ny Unholy DPS Death Knight Guide sy ny Tanking miaraka amin'ny Knight Death Blood.
Hevitra: momba ny fanovana ny DK nataon'i MuyOscuro
Azo inoana fa manaraka ny fiovan'ny kilasy ianao Knight Knight ho an'ny Cataclysm ary ankehitriny, manana isika ny hevitr'ireo izay milalao ny kilasy momba ny fiatraikan'izany fiovana izany. Noho izany, mangataka aminao izahay hampiasa ny rafi-pifidianana lahatsoratra hanombanana ny lahatsoratra an'ny Maizina be miangatra
Tsara aho Maizina be Ary ity ny hevitro momba ny fanovana ny Death Knight.
Fanazavana voalohany momba ny rafitra rune CdlM vaovao
Ghostcrawler dia nahatsapa fa ny mekanika Rune izay ampidirina amin'ny Cataclysm, dia somary ...
Fampandrosoana kilasy amin'ny cataclysm: Death Knight
Araka ny nantenainay dia efa manana ny fijerena voalohany ireo fanovana hatao amin'ny kilasy izahay Knight Knight en taorian'ilay loza. Ireo fanovana ireo dia navoakan'i Blizzard ary nahatonga ny fikasan'ny mpamolavola kilasy hiresaka mazava an'ity kilasy ity. Mariho fa ireo fanovana ireo dia mialoha ary ny zavatra mety (sy hiova) hiova mandritra ny dingana Beta an'ny Cataclysm.
Ho fanampin'izay, mamporisika anao aho hitsidika tsy tapaka an'ity lahatsoratra ity satria hanavao azy izahay rehefa misimisy kokoa ny mombamomba ny Death Knights. Matetika izy ireo dia mamaly ny fanontanian'ny mpampiasa mba hanazavana na hanambarana zavatra vitsivitsy hafa.
Ireo no fanovana lehibe indrindra amin'ny kilasy:
Valan'aretina (misy amin'ny haavo 81): Ny valanaretina dia hamindra ny lasibatra amin'ny Frost Fever sy Blood Plague tsy misy vidin-javatra haingana;
Fitokonana nezotika (haavo 83): Ny Necrotic Strike dia fanafihana vaovao izay hiatrika fahasimbana ary hampisy vokany izay hisitraka fanasitranana betsaka miorina amin'ny habetsaky ny fahasimbana atrehana an'ny CoM;
Dark Simulacrum (haavo 85): Hanafika ny lasibatra aminy ny Knight Knight ary hametraka effet izay ahafahany mamorona dika mitovy amin'ny tsipelina manaraka navoakan'ny mpanohitra azy, mamela ny CdlM handefa an'io ody io ihany.
Bonus fifehezana - fanararaotana fanasitranana: Rehefa manasitrana ny tenany izy ireo dia hahazo vokatra fanampiny izay hisitraka fahasimbana.
Azonao atao ny mahita ny tohin'ny fampahalalana aorian'ny fitsambikinana.
Torolàlana ho an'ny Knight Knight tsy masina DPS
Ny Death Knight ao amin'ny sampana Unholy dia nahazo fanovana maro hatramin'ny nivoahan'ny fanitarana, angamba ilay sampana no niova indrindra. Ity sampana ity dia nampiavaka ny talenta hatrany, Ebon Plaguebringer Mampitombo ny fahasimban'ny aretina amin'ny 30% ary, ambonin'izany rehetra izany, ny fahasimban'ny majika 13% izay tsy azon'ny kilasy hafa atolotra miaraka amin'ny mora ataon'ny Death Knight amin'ny tanjona iray sy marobe indray mandeha.
Ary maninona no mandoto?
Tsotra satria io no tsara indrindra. Misy antony hafa koa anefa. Ity sampana ity dia manome DPS tena tsara sy maharitra ho lasibatra, saika tsy voavaha amin'ny fahasimban'ny faritra, mitondra tombony miavaka amin'ny fanafihana, ary tena azo iainana.
Fiara mifono vy miaraka amin'ny Knight Knight
Toro-marika momba ny tanking miaraka amin'ny Knight Death Blood
Resadresaka nifanaovana tamin'i Ghostcrawler momba ny Knights Fahafatesana
Talenta roa ho an'ny Death Knight
Koa satria eo akaiky eo ny Patch 3.1, fotoana mety izao hanombohana miresaka talenta roa sy kilasy tsirairay avy aminy. Manokana anio dia hiatrika ny Knight Knight isika.
Azo antoka fa manana vintana bebe kokoa izy ireo noho ny ambiny kilasy satria ny sampan'ny talenta tsirairay dia tena ilaina amin'ny DPS na Tanking, saingy, toy izany koa, ny sampana sasany dia tsara kokoa noho ny sasany ho an'ny andraikitra sasany ary azo antoka fa te hanana talenta tsara indrindra ianao Ataovy ny asanao. Ny Death Knights sasany dia nanandrana tamin'ny talenta hybrid DPS / Tank fa ankehitriny, rehefa tonga ny talenta roa, tsara kokoa ny manokana ny talenta amin'ny andraikitra manokana ary avy eo mifamadika raha te hanao zavatra hafa isika.
Manana làlana telo lehibe horesahana izahay: Tank / PvE DPS, Tank / PvP DPS ary PvE DPS / PvP DPS arakaraka ny fahalianana. Ny ampahany sarotra dia ny fahalalana izay fitambarana mety aminao sy ny sorority ary ny sampana ifantohana.